युवा सोध्छन खोई इटरीमा डेटिङ स्पट ? सांसद साँवा भन्छन समय लाग्छ - Saptakoshionline
युवा सोध्छन खोई इटरीमा डेटिङ स्पट ? सांसद साँवा भन्छन समय लाग्छ
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ११, २०७५ समय: ९:२१:४९
इटहरी/ सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ बाट बाट उम्मेदवार बनेका सर्वध्वज साँवा सात हजार मतान्तरले विजयी बनेका प्रदेश एकका सांसद हुन । साँवा इटहरीका पूर्व मेयर समेत हुन् ।
इटहरीमा आकाशे पुल बनाउने र त्यहाँ डेटिङ स्पट बनाउने योजना भाषण गर्दै भोट मागेका उनले कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेललाई पराजित गरेका थिए । युवाहरु माझ लोकप्रिय हेमकर्ण पौडेललाई पराजीत गर्नलाई उनलाई डेटिङ स्पट को भाषणाले साथ दिएको थियो । युवाहरु आकाशे पुलमा बसेर डेटिङ बस्ने आशामा साँवालाई युवाहरुले मत हाले । साँवाले २६ हजार ६२७ मत पाएका थिए भने पौडेलले १९ हजार हजार २४५ मत पाएका थिए । साँवा विजय पनी भए । ताप्लेजुङ खोप्लिङमा जन्मेका साँवाले चुनावी सभामा ‘हामी के बनाउन चाहान्छौ इटहरीलाई? अब हामी इटहरीलाई आहा इटहरी बनाउन चाहन्छौँ । कसरी त ? हामी इटहरीको चारैतिर आकाशे पुल बनाउनेछा । र, यसलाई हामी युवायुवतीको डेटिङस्थल बनाउनेछौं,’ भनेका थिए । साँवाले भनेका थिए, ‘अहिले हामी गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि आइज न भन्छौ । अब आकाशे पुलमा आइज भन्छौ, त्यहाँ सेल्फी खिच्छौँ, फोटो खिच्छौँ ।
उनले इटहरीमा ‘डेटिङ स्पट’को लागि आकाशेपुल बनाउने भनिरहँदा त्यसले युवामा राम्रै तरंग ल्याएको थियो । कतिपयले आफूहरूको भावना बुझ्ने अभिव्यक्ति भने त कतिपयले वाहियात भन्दै आलोचना समेत गरका थिए । अहिलेका प्रदेश सांसद र इटहरीका पूर्वमेयर साँवाले यसअघि पनि युवायुवतीको लागि डेटिङ पार्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । तर हालसम्म इटहरीमा ‘डेटिङ स्पट’ बनाउने कुनै छाटकाट देखीएको छैन । इटहरीका एक युवाले भने आकासे पुल माथीको ‘डेटिङ स्पट’ त परको कुरा भयो इटहरीमा आकासे पुल पनी गफै मात्र भयो । यता प्रदेश एकका सांसद सर्वध्वज साँवाले भने के्रन्द्रवाट अमुमती दिनुपर्ने रहेछ । ६ लेनको सडकको सिंमाङ्गकन नहुदा काम हुन नसकेको र सडक निमार्णले गर्दा बाधा पुर्याएको बताए । आकासे पुलको लागी बजेट भएपनी केन्द्रीय सरकारबाट आकासेपुलका लागी अनुमती नदीएको कारण समस्या भएको बताउनु भयो । उनले हाल इटहरी चोकमा आकासे पुल बामएमा सडक विस्तारको क्रममा भत्कने सक्ने भएकाले तत्काल आकाशे पुल निमार्ण गर्न नसकीने केही समय लाग्ने तर बनाएर छाड्ने बताए । इटहरीका व्यवसायी एवम समाजसेवी दिवस पोखरेलले जनप्रतिनीहरुले गफमात्र गर्ने तर काम नगर्ने भएकाले जनता निरास भएको बताए ।